Bezibuya emkhosini womhlanga | News24
Bezibuya emkhosini womhlanga
Laba bebejabulela ukuba khona emkhosini wezintombi KwaNyuswa nguNks Petra Rickson no Nks Nomasonto Zondi IZITHOMBE: ZITHUNYELWE
UNDLUNKULU wesizwe saKwaNyuswa esigodini saseNkulu uthi ukuhlolwa kwezintombi kuwusiko futhi indlela abafundisa ngayo izingane zamantombazane ukuziphatha.
UNdlunkulu ukusho lokhu ngesikhathi kunomgubho wezintombi KwaNyuswa esigodini saseNkulu ngoMgqibelo emini.
Uthe: “Sizofundisa izingane indlela yokuziphatha futhi lokhu kuwusiko olufanele,” kusho uNdlunkulu.
Lomgubho uhlelwa minyaka yonke kanti izintombi zisuke zizoziqhenya ngobuntombi bazo
Inhloso yalo mkhosi bekuwukulungiselela izintombi namatshitshi njengoba ziziya eMkhosini woMhlanga esigodlweni saseNyokeni ezinyangeni ezimbili ezizayo, nokuwafundisa indlela ekumele aziphathe ngayo njengoba beyizintombi. Kukhulunywe ngokuthi kumele bazithibe ocansini futhi babe nenhlonipho bazihloniphe nabo.
Enye yezinto ebezigqugquzelwa ukuthi baziqhenye ngemzimba yabo futhi bayithande.
Kulo mcimbi kuphinde kwanxuswa wonke amaKhosi asakhothama nasaphila ukuthi bavikele izimbali zabo ezizoya eMkhosini omkhulu woMhlanga kulo nyaka.
Kukhunjulwe amantombazane aseMzumbe lawa aba sengozini eyisibhicongo yebhasi ngonyaka ka-2013 ngesikhathi ebuya KwaNongoma.
Amantombazane abegcwele kulo mcimbi ephuma ezigodini ezahlukene zaKwaNyuswa kanti abukeke ekuthokozela lokhu.
Okunye okuphinde kwaba igugu kulo mkhosi ukubona abezinye izinhlanga bezothamela lolusuku olukhulu ezintombini kanye nokwesekwa kwalo mcimbi ngabe nhlangano yezokuvakasha i-Ugu South Coast Tourism.
UMnuz Maxwell Mhlongo ongumgqugquzeli ngaphansi kwale nhlangano uthe ukuphuma kwezintombi kanye nesasasa elikhonjiswa abezokuvakasha kusho ukuthi lo mkhosi uyakhula minyaka yonke futhi uyadlondlobala.
Kanti-ke kube sekudliwa inyama, izinsizwa nezintombi saviliyela zashaya ingoma kwakuhle kwaba njeya.